Chechina beta yeTVOS 13.2 uye yechishanu yeWatchOS 6.1 yevagadziri | Ndinobva mac
Chechina beta yeTVOS 13.2 uye yechishanu yeWOSOS 6.1 yevanogadzira
Apple ichangoburitsa akati wandei matsva ekuvandudza mabhatas anosanganisira yechina beta yeTVOS 13.2, yechishanu yeWOSOS 6.1, uye yechina zvakare yeIOS 13.2 uye iPadOS 13.2. Chiteedzero che beta shanduro umo Hatigone kuwana inotevera macOS Catalina beta, asi izvozvo zvichauya mangwana.
Shanduro nyowani dzakaburitswa kune vanogadzira dzinowedzera shanduko dzakajairwa senge kugadzikana kwesisitimu uye kugadzirisa kugadzirisaIvo zvakare vanogadzirisa mabugs akaonekwa mushanduro dzakapfuura uye zvinofungidzirwa kuti isu tiri padyo nekuzvigamuchira kubva kune vamwe vashandisi vasiri vagadziri muchimiro cheshanduro dzepamutemo, saka dzinofanirwa kuve dzakakwenenzverwa.
Ichokwadi ndechekuti idzi dzazvino vhezheni dzeApple software dziri kuita kunge dzakanyongana mupfungwa yematambudziko nemabhugi, saka kambani yakamanikidzwa kuvhura vhezheni nyowani dzevashandisi vari kumhanyisa idzi bug. Iye zvino zvinoita sekunge zvinhu zvakadzikama uye shanduro nyowani dzinoitirwa vashanduri.
Zvinogoneka kuti mwedzi uno usati wapera kana kutanga kwaNovember tinenge tatova nenhau pamusoro pezvitsva zvinyorwa zve iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV neMacs, Tichaona kana vakatora nguva yakareba kuti vazivise zviri pamutemo. Parizvino, yega beta vhezheni isina vanogadzira ndeye macOS Catalina, inotarisirwa mangwana kana zvese zvikaenderera samazuva ese. Nezve shanduro nyowani dzebeta dzakaburitswa, tinokurudzira kuti uvasiye mumaoko evanogadzira uye mirira shanduro dzakagadzikana kuti dzidzivise matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chechina beta yeTVOS 13.2 uye yechishanu yeWOSOS 6.1 yevanogadzira
Iyo Mac Pro inenge yave kuda kurova pamusika
Podcast 11x09: Uye Keynote yeiyo Rini